‘मैले मेरो महासचिवबाट के सिक्ने ?’ « Janata Samachar
‘मैले मेरो महासचिवबाट के सिक्ने ?’
प्रकाशित मिति : बैशाख १५, २०७६ आइतबार
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य मेटमणी चौधरीले पार्टीमा पछिल्लो समय भइरहेका गतिविधिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । दुई वामघटकबीच भएको एकतालाई विधिसम्मत भएको बताउनुभएका नेता चौधरीले पार्टीभित्रका गतिविधि सन्तोषजनक नभएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । रेडियो जनताको दैनिक बिहानी कार्यक्रम समय सम्वादमा (साढे ६ बजे) बोल्नुहुँदै चौधरीले पार्टी नेतृत्वको गतिविधिले पछिल्लो पिढीको भविष्य अन्यौलमा परेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाले भन्नुभयो, ‘मैले मेरा महासचिवबाट के सिक्ने ? मबाट मेरो पुस्ताले के सिक्ने ? मेरो पछिल्लो पुस्ताले के सिक्ने ? कम्युनिष्टहरु फराकिलो सोचका हुन्छन्, आफूमाथि केही आरोप लागे विवादमा तानिए स्वःस्फूर्त राजीनामा दिन्छन् भन्ने म्यासेज जान सकेन ।’ दुई तिहाईको बहुमत पाएको सरकारको साख जोगाउन नभई व्याक्ति जोगाउन नेतृत्व लागिपरेको चौधरीको आरोप छ । महासचिव बिष्णु पौडेलले नैतिक रुपमा राजीनामा दिनुपर्ने चौधरीको भनाई छ ।
एक फरक प्रसंगमा बोल्दै चौधरीले सरकार समृद्धिको दिशामा अगाडि बढिरहेको भएतापनि केही मन्त्रीका कारण प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सपना साकार नभएको आरोप लगाउनुभयो । यातायातको सिन्डिगेट हटाउने प्रयास थालिएतापनि अन्ततः यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ नै व्यवसायीलाई संरक्षण गर्नतर्फ लागेको उहाँको आरोप थियो । नेकपाको एकताले ढिलै भएपनि सकारात्मक सन्देश दिएको उहाँको दाबी छ । नेतृत्वको कार्यशैलीमा प्रश्न गर्नुभएका चौधरीले एकलौटी ढंगले अगाडि नबढ्न चेतावनी दिनुभएको छ ।
प्रस्तोता खेम बम र नेकपाका नेता मेटमणी चौधरीबीचको सम्वाद